बिपद व्यवस्थापनमा एकजुट बनौं::Online News Portal from State No. 4
बागलुङ, १० जेठ – बर्षातको समयमा हुन सक्ने बिपद बिरुद्ध सबैले मिलेर प्रतिकार्य गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाईटी जिल्ला शाखाले आयोजना गरेको जिल्लास्तरीय सरोकारवालाको समन्वय बैठकमा सरोकारवालाले सबै स्थानीय तहमा बिपद योजना बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिए । रेडक्रसको अगुवाईमा अहिले सम्म बागलुङ नगरपालिकाको वडा नं. १, ७, ८ र ११ नम्बर वडाले योजना बनाएको सभापति जब्बरबहादुर लामिछानेले बताए । त्यस्तै काठेखोला गाउँपालिकाको वडा नं. ५, ७ र ८, जैमिनी नगरपालिकाको वडा नं. ८ र बडिगाड गाउँपालिकाको वडा नं. ५ र ७ मा योजना बनिसकेको हो । अन्य वडाहरुमा पनि योजना बनाउन सुझाव दिइएको उनले बताए ।
स्थानीय तहमै बिपद बिरुद्धका क्रियाकलाप संचालन गर्न सकिने क्षमता बिकास गर्दै प्रभावित, घाईते र मृतकको संख्या कम गर्न योजना बनाइएको हो । योजनाले उद्दार कर्ताको क्षमता बिकास गर्ने उद्देश्य समेत राखेको सोसाईटीको बागलुङ शाखाका कार्यक्रम संयोजक श्यामप्रसाद कोइरालाले बताए । योजना बनाइएका स्थानीय तहका हरेक वडामा १२ जनाको दरले खोजी तथा उद्दार कार्यदल समेत बनाइएको छ । हरेक वडामा ११ जना देखि १७ जना सम्मको व्यवस्थापन समिति र उद्दार कार्यदल बनाएर आवस्यक सामाग्री पनि बितरण गरिएको छ । सबै स्थानीय तहको समन्वयमा सबै वडामा यस्ता कार्यदल र उद्दार समितिहरु बनाउँदा बिपद बिरुद्ध लड्न सहज हुने उनले बताए ।
२०७२ को भूकम्प पछि नेपाल सरकारले बिधेयक मार्फत बिपद व्यवस्थापनको नीति ल्याएको थियो । गत बर्ष ऐन समेत आएकोले अब हरेक वडातहमै कार्यदल बन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षेत्रीले बताए । योजनामा घटना घटेको पहिलो एक घण्टा देखि २४ घण्टा सम्म घटनास्थल पुगेर गरिने खोजी र उद्दार देखि १ महिना सम्ममा पुनस्थापना, राहत तथा अन्य व्यवस्थापन सहितका काम समावेश छन् । रेडक्रसको अध्ययनबाट जिल्लामा सबैभन्दा धेरै आगोलागिका घटना भएको भेटिएको छ । त्यस्तै बिद्यालय तहमा कृतिम घटनामार्फत उद्दारका जानकारी गराइएको पनि लामिछानेले बताए । बैठकमा प्रजिअ लुकबहादुर क्षेत्री, बागलुङ नगरपालिका बिपद व्यवस्थापन समितिकी संयोजक लक्ष्मी बोहोराले बोलेका थिए । जब्बरबहादुर लामिछानेको अध्यक्षता, नारायण शर्माको संचालन र उपाध्यक्ष राजेन्द्र आचार्यको स्वागतमा बैठक सम्पन्न भएको थियो ।